Tools उपकरणहरू पोष्टरहरू अनलाइन बनाउन क्रिएटिव अनलाइन
लोला करील | | ग्राफिक डिजाइन, डिजाइन उपकरणहरू
एक पोस्टर हो कुनै पनि प्रकारको घटना घोषणा गर्ने धेरै राम्रो तरीका, प्रोजेक्ट वा पहल। यसको डिजाईन मौलिक छ, किनकि जसले यसलाई हेर्दछ उसले उनीहरूलाई पढ्न मात्र रोक्छ यदि उनीहरू पर्याप्त हड्ताल भए भने। अरु के छ त, पोस्टरमा रहेको जानकारी पूर्ण रूपमा व्यवस्थित र सुचित हुनुपर्छ। तसर्थ, तपाईले लिनु भएको सबै निर्णयहरू महत्वपूर्ण हुन्छन्, टाइपोग्राफी, पाठको आकार, र color्ग, छविहरू, हरेक विवरणहरूको ख्याल गर्नुपर्दछ। तिनीहरूलाई सिर्जना गर्न राम्रो प्रोग्राम छनौटले तपाईंको काम अधिक सजिलो बनाउन सक्छ र, भाग्यवस, आज तपाईं ग्राफिक डिजाइनको एक महान् मास्टर हुनु आवश्यक छैन सौन्दर्यवादी र ध्यान आकर्षण गर्ने पोस्टर। वेबमा असंख्य नि: शुल्क उपकरणहरू छन् जुन तपाईंलाई सामग्री द्रुत र सजिलो बनाउनको लागि अनुमति दिन्छ। यस पोष्टमा हामीले छनौट गरेका छौं Tools औजारहरू पोष्टरहरू अनलाइन बनाउन यो नछुटाउ!
1 एडोब स्पार्क
1.1 एडोब स्पार्कमा कसरी पोष्टर बनाउने
2 पोस्टर कारखाना
2.1 पोस्टर कारखानाको साथ कसरी पोस्टर बनाउने
3.1 कसरी क्रिल्लोमा पोस्टर डिजाइन गर्ने
4.1 क्यान्भामा पोस्टरहरू डिजाइन कसरी गर्ने
5.1 कसरी Fotojet मा एक पोस्टर डिजाइन
एडोब स्पार्क यो एक अनुप्रयोग हो एडोब प्रणाली द्वारा डिजाइन वेब र मोबाइल उपकरणहरूको लागि। यस कार्यक्रमको साथ तपाईं अत्यधिक आकर्षक सामग्री सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ, वेब पृष्ठहरू, छोटो भिडियो र सामाजिक नेटवर्कको लागि टुक्रा। यद्यपि तपाईं भुक्तान सदस्यताका साथ सबै स्रोतहरू मात्र पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईंसँग धेरै उपलब्ध छन् नि: शुल्क सदस्यता संग निःशुल्क स्रोतहरू। एडोब स्पार्क टेम्पलेट्स प्रदान गर्दछ, त्यसैले यो एक हो धेरै राम्रो विकल्प यदि तपाईं एक आँखा लाग्ने पोस्टर सिर्जना गर्न आवश्यक छ, राम्रो डिजाइन र कुनै समय मा। साथै, यदि तपाइँ चाहानुहुन्छ भने, तपाईं खाली फाईलबाट सुरू गर्न सक्नुहुनेछ र यसलाई आफैं डिजाईन गर्नुहोस्।
एडोब स्पार्कमा कसरी पोष्टर बनाउने
गृह स्क्रिनमा, शीर्षमा, तपाईंसँग खोजी ईन्जिन छ। यदि तपाईं त्यहाँ पोष्टर वा पोस्टर टाइप गर्नुहुन्छ भने, तपाईं मोडेलको विस्तृत श्रृंखलामा पहुँच गर्नुहुनेछ। प्रत्येक डिजाइन पूर्ण रूपले सम्पादन योग्य छ, त्यसैले तपाईं यसलाई आफ्नो शैली र आफ्नो आवश्यकता अनुकूल गर्न सक्नुहुन्छ।
कार्यक्रम प्रबन्ध गर्दै यो धेरै सहज छ। टेम्प्लेटमा क्लिक गरेर, डिजाईन स्वत: खुल्नेछ। स्क्रिनमा तपाईले दुई साइड पट्टिहरू देख्नुहुनेछ: दायाँमा, तपाईं पृष्ठभूमि, र editहरू सम्पादन गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईं पोस्टरको आकार पनि परिमार्जन गर्न सक्नुहुनेछ किनभने डिजाइन स्वचालित रूपमा नयाँ आयामहरूमा अनुकूल हुनेछ; बाँयामा एकमा, तपाईं पाठ, फोटोग्राफहरू, आइकनहरू, लोगोहरू र अन्य संसाधनहरू थप्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईं समाप्त गर्नुहुन्छ, तपाईं यसलाई डाउनलोड वा सिधा तपाईंको नेटवर्कमा प्रकाशित गर्न सक्नुहुनेछ सामाजिक केवल दोष यो हो कि यदि तपाईं सदस्यता लिनुभएको छैन भने पोस्टर एपीको साथ सुरक्षित गरिएको छतल्लो दायाँ कुनामा सानो वाटरमार्क।
पोस्टर कारखाना एक अनलाइन सम्पादक हो विशेष सोचे पोस्टरहरू सिर्जना गर्न, पोस्टरहरू, उडानहरू र टेम्पलेट्सबाट ब्रोशरहरू, सजिलो र धेरै छिटो। वेब भित्र तपाईं विभिन्न र colors र आकारका टेम्प्लेटहरू फेला पार्नुहुनेछ, र सबै भन्दा राम्रो कुरा यो हो कि तिनीहरू सबै हुन् नि: शुल्क र सम्पादन योग्य।
पोस्टर कारखानाको साथ कसरी पोस्टर बनाउने
यस सम्पादकमा पोष्टर सिर्जना गर्न एकदम सजिलो छ। वेब प्रविष्ट गर्दा, "टेम्पलेट्स" शब्दका लागि स्क्रीनको शीर्षमा हेर्नुहोस्। सबै डिजाईनहरूको पहुँच गर्न, एउटा छनौट गर्नुहोस् जुन तपाईंलाई सबैभन्दा धेरै यकिन गर्दछ र पोस्टर फ्याक्ट्रीका सुविधाहरू प्रयोग गर्दछ यसलाई तपाईंको मनपर्नेमा अनुकूल बनाउन। स्क्रिनको दायाँपट्टि तपाईंसँग सबै तत्वहरू उपलब्ध छन् जुन तिनीहरूको स्थिति अनुसार पोस्टर मिलाइन्छ। शीर्ष पट्टिमा तपाईले आफ्नो डिजाइन सम्पादन र पूर्ण गर्नका लागि उपकरणहरू भेट्टाउनुहुनेछ। तपाईं सबै चीज, पाठ, र colors परिमार्जन गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईं नयाँ तत्त्वहरू पनि थप्न सक्नुहुनेछ।
Crello एक ग्राफिक डिजाइन उपकरण हो पूर्ण नि: शुल्क अनलाइन जसले तपाईंलाई द्रुत र सजिलो सामग्री उत्पन्न गर्न मद्दत गर्दछ। कार्यक्रम भित्र तपाईं सबै प्रकारका टेम्प्लेटहरू फेला पार्नुहुनेछ, सामाजिक मिडिया लेआउटहरू, ब्लग हेडलाइन्स, प्रमाणपत्र, र पाठ्यक्रम पोस्टर र ब्यानर। अरु के छ त, तपाईं संसाधनहरूको एक विस्तृत विविधता पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ यसले तपाईंलाई तपाईंको सिर्जनाहरू समृद्ध बनाउन र तपाईंको व्यक्तिगत स्पर्श दिन मद्दत गर्दछ।
कसरी क्रिल्लोमा पोस्टर डिजाइन गर्ने
क्रिल्लोमा पोस्टर सिर्जना गर्न तपाईलाई होम स्क्रिनमा जानु पर्छ र खोज इञ्जिनमा "पोस्टर" शब्द लेख्नुहोस्।। यस तरीकाले तपाईं प्रोग्रामले प्रस्ताव गरेको बिभिन्न टेम्प्लेटहरू पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई मन पराउनुहुनेमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईलाई सम्पादन गर्नको लागि तपाईले यसलाई उत्तम बनाउनु हुन्छ। दाँया पट्टिमा, तपाईं एक प्यानल फेला पार्नुहुनेछ जसले विभिन्न उपकरणहरूमा पहुँच दिन्छ। तपाईं छविहरू, वस्तुहरू, पाठहरू थप्न सक्नुहुन्छ र आफ्नै स्रोतहरू अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईं समाप्त गर्नुहुन्छ तपाईं आफ्नो डिजाइन डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ वा तपाईंको सामाजिक नेटवर्कमा सिधा साझा गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं टेम्प्लेटहरूसँग काम नगर्न रुचाउनुहुन्छ भने, तपाईं जहिले पनि एउटा खाली फाईलबाट सुरू गर्न सक्नुहुन्छ, गृह स्क्रिनमा चयन गरेर "अनुकूलन आकार" र उपयुक्त आयामहरू प्रविष्ट गर्दै (म suggest२ x .42 .59.4 ..XNUMX suggest सुझाव गर्दछु)।
कावा सबै प्रकारका सामग्रीहरू सिर्जना गर्दा एक उत्तम ज्ञात र सबै भन्दा बहुमुखी अनलाइन डिजाइन उपकरण हो। कार्यक्रम आकर्षक डिजाइन संग टेम्पलेट को एक विस्तृत विविधता प्रदान गर्दछ र पूर्ण रूपमा परिमार्जन योग्य। तपाईं लगभग केहि गर्न सक्नुहुन्छ, व्यापार कार्डहरू, पोस्टरहरू, भिडियोहरू, सामाजिक नेटवर्कहरूको लागि पोष्ट, प्रस्तुतीकरणहरू ... Eक्यान्भामा पहुँच निःशुल्क छ, जबकि केहि स्रोतहरू प्रो सदस्यता संग मात्र उपलब्ध छन्। तैपनि, तपाईं केवल निःशुल्क स्रोतहरूको प्रयोग गरेर अविश्वसनीय परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, तिनीहरू पर्याप्त छन् र थप रूपमा, तपाईं जहिले पनि आफ्नो स्रोतहरू अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईंको सम्भावनाहरू विस्तार गर्न। यस प्लेटफर्ममा पोष्टर डिजाईन एक धेरै राम्रो विचार हो किनभने अनलाईन भएर पनि, तपाईले पाउनु हुने गुण इष्टतम र पनि हो। यसले तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्दछ यदि तपाईंसँग धेरै ग्राफिक डिजाइन सीपहरू छैनन् भने।
क्यान्भामा पोस्टरहरू डिजाइन कसरी गर्ने
क्यानभा एक सजीलो उपयोग उपकरण हो, त्यसैले तपाइँसँग यसमा अनुकूलन कुनै समस्या हुँदैन। क्यान्भामा पोस्टरहरू बनाउनको लागि तपाईको शीर्षमा अवस्थित खोजी ईन्जिनमा जानुपर्दछ घर र प्रविष्ट गर्नुहोस् शब्द "पोस्टर" वा "पोस्टर"। कार्यक्रमले तपाईंलाई सबै प्रकारका टेम्प्लेटहरू देखाउँदछ, बिभिन्न शैली र प्यालेटहरूको साथ। अरु के छ त, तपाई र colors्गहरूद्वारा फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईलाई सबैभन्दा धेरै चासो राख्ने मानिसहरुलाई राख्न। जे भए पनि, यदि तपाइँ एक डिजाइन मनपर्दछ, तर र colorले तपाइँलाई मनपर्दैन भने, त्यो याद गर्नुहोस् प्यालेट सँधै परिवर्तन गर्न सकिन्छ.
जब तपाईं तिनीहरू मध्ये कुनै एकमा क्लिक गर्नुहुन्छ, तपाईं सम्पादन सुरु गर्न तयार हुनुहुन्छ! क्यान्भा क्रेलो जस्तै धेरै काम गर्दछ। दायाँ प्यानलमा तपाईं पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ विभिन्न स्रोतहरू र तेर्सो प्यानल मा तपाईं पाउनुहुनेछ मुख्य उपकरणहरू।
अन्य अनलाइन डिजाइन कार्यक्रम क्रेलो र क्यान्भालाई समान सुविधाहरू प्रदान गर्दै छ फोटोजेट। यस प्लेटफर्ममा तपाईं टेम्प्लेटहरूको एक ठूलो संख्या पनि फेला पार्नुहुनेछ र संसाधन जसले तपाईंलाई अविश्वसनीय टुक्रा बनाउन मद्दत गर्दछ। विस्तृत डिजाइन गर्न सक्षम हुनुको साथै, यो पनि सम्भव छफोटोहरू सम्पादन गर्नुहोस् वा कोलाजहरू सिर्जना गर्नुहोस् यो सबै एक मा छ! अर्को फाइदा भनेको यसलाई प्रयोग गर्नु हो तपाईंले दर्ता गर्न पनि आवश्यक पर्दैन। केवल दोष मैले देखेको छु कि यदि तपाईं अनुकूलन आकारको फाईल सिर्जना गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईंले प्रो सदस्यताका लागि तिर्नु पर्छ।
कसरी Fotojet मा एक पोस्टर डिजाइन
Fotojet मा पोस्टरहरू बनाउन, मा होमपेज बटनमा क्लिक गर्नुहोस् "एउटा डिजाइन सिर्जना गर्नुहोस्।" कार्यक्रमले तपाईंलाई सबैभन्दा अधिक प्रयोग टेम्प्लेटहरू देखाउँदछ। मार्केटिंग सेक्सनमा, "पोस्टर" मा क्लिक गर्नुहोस् र आफूले चाहानु भएको डिजाईन छनौट गर्नुहोस्। त्यो हो, निश्चित गर्नुहोस् कि यो मुकुटले चिनो लगाइएको छैन किनकि यसको मतलब टेम्पलेट भुक्तान गरिएको छ।
Fotojet मा सम्पादन सरल छ, दायाँ प्यानलमा तपाईं सक्नुहुन्छपाठ र अन्य स्रोतहरू थप्नुहोस्। कुनै पनि तत्वमा क्लिक गर्नाले यसलाई परिवर्तन गर्न सबै आवश्यक उपकरणहरू देखाउँदछ। जब तपाइँ समाप्त हुन्छ, pतपाईं आफ्नो सिर्जना डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ वा सामाजिक नेटवर्कमा साझा गर्न सक्नुहुनेछ.
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » डिजाइन उपकरणहरू » Tools औजारहरू पोष्टरहरू अनलाइन बनाउन